११ फोटोहरुमा हेर्नु टियु मैदानमा सचिन तेन्दुलकरले के-के गरे | KhelNepal
११ फोटोहरुमा हेर्नु टियु मैदानमा सचिन तेन्दुलकरले के-के गरे
महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरले नेपाल भ्रमण अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा प्रदर्शनी खेल खेलेका छन्।
शनिबार मध्यरातमा नेपाल आएका सचिन युनिसेफको सद्भावना दुतको रुपमा नेपाल आउने क्रममा बालबालिकाहरु सम्मिलित टिमसंग प्रदर्शनी खेल खेलेका थिए। सचिनले बालबालिकाहरुको एउटा टिमको नेतृत्व गरेका थिए भने अर्को टिमको नेतृत्व नेपालका पुर्व कप्तान बिनोद दासले गरेका थिए।
तेन्दुलकरले खेलको दौरान ब्याटिंग गर्दै १ चौका मदतले ७ रन बनाए। बालबालिकासंग खेल भएकोले तेन्दुलकरले रमाइलोको लागि ब्याटिंग गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले फिल्डरलाई आफ्नो क्याच लिने अवसर दिएका थिए। सचिनले कुल २ ओभर ब्याटिंग गरेका थिए। ब्याटिंगको अन्तिम बलमा सचिनले लंग अनमा चौका प्रहार गरेका थिए।
खेलको दौरान सचिनले आफै फिल्डिंग सेट गरेका थिए भने विकेटकिपरको भूमिका निभाए। यस्तै उनले १ ओभर बलिङ्ग पनि गरे। सचिनले देब्रे हातले बलिङ्ग गरेका थिए। प्रदर्शनी खेल सचिनको टिमले जित्यो। पहिले ब्याटिंग गर्दै बिनोद दासको टिमले दिएको ४५ रनको लक्ष्य सचिनको टिमले भेटायो।
खेलपछि सचिनले आफ्नो भ्रमण बारे मन्तब्य समेत व्यक्त गरेका थिए। मन्तब्यको क्रममा उनले बालबालिकाहरुलाई गल्ति गर्नबाट नरोक्न अभिभावकहरुलाई अनुरोध गरेका थिए। गल्तिबाटनै पाठ सिक्ने हुँदा उनीहरुलाई गल्तिबाट सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उनको जोड थियो। त्यस क्रममा उनले आफ्नो बाल्यकालमा आफु निकै चकचके बच्चा भएको समेत बताएका थिए।
सम्बोधनको सुरुवात सचिनले ‘नमस्ते’ भन्दै गरेका थिए। मन्तब्यको क्रममा उनले मैदानमै उपस्थित नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमलाई निडर भएर क्रिकेट खेल्न बताएका थिए।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा बिनोद दासले सचिन क्रिकेटको भगवान भएको र टियु मैदान रुपी मन्दिरमा उनलाई स्वागत छ भनेर सम्बोधन गरेका थिए।
नमस्ते Nepal ??!
Happy to be here in Kathmandu. Suchabeautiful city! pic.twitter.com/YFTJwiXFZ2
— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 16, 2019
औपचारिक कार्यक्रम पछि सचिनले प्रदर्शनी खेलमा सहभागी खेलाडीहरुलाई टिप्स दिएका थिए। त्यसपछि उनले नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमसंग भेट्दै उनीहरुलाई टिप्स दिए। सो कार्यक्रम पछि अन्त्यमा उनि पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भए। पत्रकार सम्मेलनमा सचिनले थोरै प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। उक्त कार्यक्रम लगत्तै सचिन मैदानबाट बाहिरिएका थिए। पत्रकार सम्मेलनको भिडियो
फोटोहरुमा हेर्नुस टियुमा सचिनले के-के गरे
Photo – Binod Pandey , Twitter
( फोटोहरु – युनिसेफ )
२०७६ कार्तिक ३०, शनिबार मा प्रकाशित
प्रम कप : खेलाडी प्रोत्साहन गर्न बागमती प्रदेशद्वारा पुरस्कार घोषणा
बिग ब्यास : सिड्नीद्वारा पर्थ पराजित
एपीएफसंग प्रदेश-१ सहजै पराजित, अविनाशले लिए ५ विकेट
बिग ब्यास : फ्लेचर र जम्पा चम्कदा स्टार्सद्वारा स्ट्राइकर्स फराकिलो अन्तरले पराजित